Berbera: Wasiirka Ciyaaraha iyo Maayer Cabdalle oo isla qaatay qodobbo lagu dhammaystirayo garoon-ciyaareed caalami ah | Berberanews.com
Home WARARKA Berbera: Wasiirka Ciyaaraha iyo Maayer Cabdalle oo isla qaatay qodobbo lagu...
Berbera: Wasiirka Ciyaaraha iyo Maayer Cabdalle oo isla qaatay qodobbo lagu dhammaystirayo garoon-ciyaareed caalami ah
Berbera-(Berberanews)- Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha iyo Dhaqanka ee Jamhuuriyadda Somaliland Cabdi Siciid Faahiye oo ay waheli-nayaan Madaxda iyo khoboro dhinaca Ciyaaraha ahi, waxay socdaal shaqo ku tageen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Wasiirka oo ay ku soo dhaweeyeen magaalada Berbera madaxda heer gobol iyo degmo ee Berbera iyo Saaxil, ayaa waxay soo kormereen Garoonka caalamiga ah ee Kubbadda Cagta magaaladda Berbera, kaasoo dhawaan ay dawladda Heese ee degmada Berbera ay ka hirgalisay duleedka magaaladda.
Waxaanay Masuuliyiintan ka socday Wasaaradda Ciyaaruhu qiimayn ku sameyeen garoonka iyo wax yaabaha ka dhiban ee loo baahan yahay in lagu kordhiyo. Waxay sidoo kale kulan kula qateen garoonka dhexdiisa Maayerka magaaladda Berbera Cabdalle Maxamed Carab iyo Xoghaya guud ee Dawladda Hoose ee Berbara Cali Maxamed Cilmi oo iyagu hirgeliyay Garoonkan Caasriga ah.
Waxa ugu horrayn halkaas ka hadlay Isu-duwaha Wasaaradda Ciyaaraha ee Gobalka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan, oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu Berbera ku soo dhaweeyo Weftiga Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha.
Xoghayaha guud ee dawladda hoose ee Berbera Cali Maxamed Cilmi, oo isaguna halkaa ka hadlay, waxa uu yidhi; “Horta halkan waxaynu isugu nimi Wasaarad ahaan, Wasiirka Ciyaaraha Cabdi Siciid Faahiye ayaa innoo fah-faahinaaya waxa uu u socdo, in maanta uu Wasiirkii Ciyaaraha iyo Wefti uu hoggaaminayo oo u yimi Garoonkan aanu samaynayno in uu naga siiyo wixii talo iyo tusaale ah iyo wixii khibrada, ahaana hadday naga dhiman tahay inay nasiiyaan ayaannu ku soo casuunnay Wasiirka iyo Weftigiisa waanu naga soo ajiibay, aadna waannu ugaga mahad-celinaynaa Wasiirku inuu maanta (shalay) noo yimaaddo.”
Sidoo kale, Duqa Demgada Berbera, ahna Guddoomiyaha golaha deegaanka ee magaaladaas, Md. Cabdalle Maxamed Carab, oo halkaa ka hadlay, ayaa Wesiirka iyo Weftigiisa warbixin ka siiyey marxaladda ay la soo mareen hirgelinta garoonka, halka uu hadda marayo iyo waxyaabaha lagu kordhinayo.
Waxaanu Maayerka magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Carab u hambalyeeyey Wasiirka Ciyaaraha iyo Weftigiisa oo uu sheegay inay si diirran ugu soo dhawaynayana magaalada Berbera. “Waxa laga yaabaa dadku inay ciyaaraha aad u yaqaannaan oo ay ciyaaraan, laakiin waxa weeyaan wax aqoon u baahan, maaddaama oo uu garoonku dhadhaw yahay oo annagu iyo Ijinneerrada dhisaysaa qaybtii aannu garanaynay wadno, waxaannu ka maarmi waynay inay Wasaaradda Ciyaaruhu timaaddo iyada oo ay horsocdaan khoboradeedi. Markaa, runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa Wasiirka iyo Khoborada la socota.” Sidaa ayuu yidhi Duqa magaalada Berbera, ahna Guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdalla Maxamed Carab oo hadalka ku soo dhaweeyey Wasiirka Ciyaaraha.
Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha iyo Dhaqanka Somaliland Cabdi Siciid Faahiye, ayaa faahfaahiyey qodobbo muhiim ah oo uu sheegay inay isla qaateen Duqa Berbera. “Waxaannu Maayarka isla qaadannay baan idiin sheegayaaye waa afar qodob, qodobka ugu horreeyaa waxa weeyaan in Caarbedkii Aktarka ahaa la dhigo garoonka. Qodobka labaad halkii lagu ordaayey ee garoonka in la dhigo Rooggii Casaanka ahaa oo calaam cadina ay marsanaato Maayarka waannu isla qaadannay. Waxa kale oo aannu isla qaadannay in garoonka la geliyo Laydhkii xilliyada Habeenka ah lagu ciyaarayey ee oo awood leh oo qashaafadihii waaweynaa leh oo aynu Carabta u doonanno ama aynu waddanka-ba ka helno.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Ciyaaraha Somaliland.
Wasiirka Ciyaaraha Md. Cabdi Siciid Faahiye, oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Waxa kale, oo aannu isla qaadannay in mustaqbalka Biyihii aannu gelinno garoonka oo Qasabadihii Caagga ahaa hoosta la mariyo si mustaqbalka dhaw haddii Illaahay yidhaahdo Doog loogu beeri karo garoonka. Waxa kale oo meesha ku jira oo aannu isla qaadannay Maayerka laba garoon oo is-garab-yaalla oo habeenkii lagu ciyaaro Baaskidka, Fooli-da iyo Tanista-ba.”
Si kastaba ha noqotee garoonkan Ciyaaraha ee dhismihiisa ay dawladda Hoose ee Berbera gacanta ku hayso ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee laga hirgeliyo dalka Somaliland, iyada oo loogu talagalay inuu noqdo garoon caalami ah oo la mida ama la nooc ah garoommada waaweyn ee dunida ee noocyada kala duwan ee Ciyaaraha.
Previous articlePetroTrans negotiates to extend Somaliland port
Next articleWefti ka socda Guddiga diiwaangelinta oo qiimayn ka bilaabay Sanaag